Miisaaniyadda dowladda federaalka ee sanadka 2018 waa $274 malyan. In lacag ka yar $300 malyan ay tahay miisaaniyadda sanadka dhan ee dowlad wajaheysa caqabado badan oo aad xasaasi u ah waa mid aanan ku filneyn. Balse miisaaniyaddaas waxa ay $14 malyan ka badan tahay tii sanadkii hore, Soomaalidana waxa ay u arkaan horumar marka loo barbar dhigo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Miisaaniyad $19 malyan ah (ama 6.9 boqolkiiba) kuma filna in lagu daboolo baahiyaha badan ee loo qabo adeegyada waxbarasho, caafimaad, iyo kuwa kale ee bulshada muhiinka u ah. Balse qoondada adeegyada bulshada waxa ay laba jibbaar ka badan tahay $8.3-kii malyan ee loo qoondeeyay adeegyada bulshada oo dhan sanadkii hore. Kororka intiisa badan waxa uu aaday Wasaaradda Waxbarashada ($7.1 million) oo sanadkii 2017 miisaaniyad u heshay $2.2 malyan iyo Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed oo ay sanadkii 2017 miisaaniyaddeedu ahayd $1.5 malyan, sanadkanna laga dhigay $2.3 malyan. Inkastoo kororkaasi uu ififaallo wanaagsan yahay, haddana waxa aanan mudnaan ku filan helin isbitaallada dowladda iyo waxbarashada heerka aasaasiga iyo dugsiyada sare.